Sihlalutya iJaybird X3, ezemidlalo eziphezulu zebluetooth | | Iindaba zeGajethi
Siyaqhubeka nokujonga kwakhona iActualidad Gadget, apho sithanda ukuzama zonke iintlobo zezixhobo ukuze wazi ukuba uza kwenza ntoni ngokuthenga iimveliso zakho. Namhlanje siza kukuzisa leyo ibekwe njengenye yeemveliso zeBluetooth ezibalaseleyo zeembaleki ezinobungcali kunye neamateur.
Siya ngaphandle kokulibazisa kunye naye Uhlalutyo olunzulu lweJaybird X3, ii-headphone ezenzelwe ukukwenza ukonwabele isandi kunye nemidlalo ngokulinganayo. Kwaye iimveliso ezingaphezulu nangakumbi zibekiwe endaweni yokwazisa iimveliso ezinokuhambelana ngokupheleleyo namaxesha ethu ezemidlalo.
IJaybird X3 ayikho enye into ngaphandle kokuvela kweJaybird X2, isixhobo esasungulwa ngo-2015 kwaye safumana ulwamkelo oluhle kakhulu kubasebenzisi, inyani kukuba iJaybird izibeke ngokwayo njengophawu oluthandwayo kwabo baSebenzisi bakhetha iihedifoni. kwezemidlalo, kunye neNkululeko zizinto eziphambili zeendlebe zeendlebe ezibalaseleyo kolu hlobo lomsebenzisi. Le yindlela iX3 ehamba ngayo ngokufezekisa zonke iinkcukacha zeJaybird X2, ewe, asizukufumana xabiso kubo bonke abaphulaphuli, sijamelene nemveliso eyilelwe eyona inzima.
2 Ukuzimela kunye nokusebenza
3 Izixhobo kunye nolunye uphuculo
4 Uluvo kunye namava omsebenzisi
Siqala ngesiqhelo, izixhobo kunye noyilo. IJaybird X2 zii-headphone ezenziwe ngeplastiki, ngumahluko omkhulu phakathi kweNkululeko kunye nezi, eyokuqala idume ngokubiza kakhulu. Kodwa into yokuba zenziwe ngeplastikhi ayibenzi ukuba banganyangeki okanye bangaphantsi. Inyaniso, Inxalenye esecaleni kwendlebe yeefowuni yenziwe ngentsimbi enganyangekiyo, njengoko sinokubona ngokubeka nokususa iiphedi esizifaka ezindlebeni zethu. Njengoko sihlala sisitsho, iJaybird ayivunyelwanga nganto kwaye ayikho enye into engaphantsi kweLogitech, kuba izixhobo zayo zibekwe ngokucacileyo kwinqanaba eliphezulu.
Intambo abanayo, isuka kwenye i-earphone iye kwenye (abazimeleyo ngokupheleleyo njengee-AirPods ngokomzekelo) inoyilo olucwangcisiweyo kunye nerabha yokuzama ukubila. Siya kuthi ke siluphephe naluphi na uhlobo lwamaqhina okanye ukubekwa kwengxaki. Njengazo zonke ii-headphone zohlobo, iJaybird X3 Zakhelwe ukuba zibubungqina bokubila, zinee-hydrological coings kunye namalungu angangeni manzi. Ezi ntloko zentloko ziyilelwe ukumelana nayo yonke into.
Siya kuba nakho ukukhetha kuzo mhlophe-golide, bomvu-mnyama kunye ngwevu-mnyama, imibala yokudibanisa enomtsalane engatsali ingqalelo egqithisileyo. IiSuariculars zinobunzima nje beigram ezili-17,9 ezinamaphiko kunye neepads.
Ukuzimela kunye nokusebenza
Sijongene neefowuni ezithi zinikezela iiyure ezisibhozo zokudlala ngokuqhubekayo, kwaye kunjalo, sizibekile ii-headphone kuvavanyo kwaye bahlala ngoku kulindelwe. Ukongeza, njengoko usazi kakuhle, iJaybird inesicelo sayo se-iOS kunye ne-Android esinokubhangqa ngayo ii-headphone zethu kwaye sikhethe zonke iintlobo zeeprofayili kuxhomekeka kuhlobo lomdlalo esiwenzayo. Kodwa ayipheleli apho, kwaye uJaybird usithembisa ngolungileyo Imizuzu engama-20 yokutshaja ukuya kuthi ga kwiyure e-1 yokuzimela, yinto esingakhange sikwazi ukuyingqinisisa, kuba sisoloko sihlawulisa ngokupheleleyo isixhobo, kodwa ayizukusothusa kwaphela xa sijonga ubungakanani beebhetri.
Iifowuni ezenziwe ngocingo zenziwe ngengubo yentsimbi kwiindawo ezithile ngenjongo yokuphucula i-eriyali yeBluetooth, ethi yona inikezele ngenguqulelo engu-4.1, isindise eyona ibhetri. Asikaze sibandezeleke kwiimvavanyo naluphi na uhlobo lokuphazamiseka okanye ukulahleka konxibelelwano, Nangona umgama esinokusebenza kuwo ujonge isixhobo esingadluliyo awugqithi kwiimitha ezilithoba okanye ezilishumi, umgangatho ofunyenwe ngelixa usenza ezemidlalo usishiye simangalisiwe. Inyani yile yokuba zii-headphone ezisezindlebeni ezineebhasikidi ezinomtsalane, into eyahlukileyo, umzekelo, iJaybird Freedom, apho ii-bass zazinqabile. Kananjalo amandla evolumu yenye yamandla ayo, ii-headphone zivakala kakhulu kwaye zilungile, ngaphandle kwento yokuba le ayisiyiyo inkcazo yezobuchwephesha esinokuthi siyinike.
Ukuba ufuna iinkcukacha, uyazi ukuba sidibana naweI-ohm impedance kunye ne-16 + -96 dB yesithethi uvakalelo kwi-3 kHz. Oku kusinika isiphumo esipheleleyo se- 5 mW ngegama okanye nge-10 mW ubuninzi. Ukuphazamiseka kweHarmonic kuhlala ngaphantsi kwe-3% kwaye ine-AAC, i-SBC kunye nee-codecs ze-SBC eziguqulweyo. Ubungakanani ngqo be-transducer ziimilimitha ezi-6.
Izixhobo kunye nolunye uphuculo
Ii-headphone zinebhokisi yolawulo / imakrofoni Esiza kuthi sikwazi ukubabiza bobabini abancedisi abasemsebenzini kunye nokulawula iifowuni kunye nolawulo lomculo. Idityaniswe kwintambo encinci sinokuphakamisa okanye sinciphise ivolumu, siye kwingoma siye kwingoma kwaye sifumane umnxeba.
Olunye lwamandla alo lulwenziwo, Ibhokisi ibandakanya ii-cushion zeendlebe zesilicos ngobukhulu obahlukeneyo obahlukeneyo, kunye nezinye izinto ezikhusela ngokupheleleyo ukuthobela indlebe imitya yeendlebe eyilelwe iingcali. eya kuthi ingene endlebeni yakho kwaye ikwandise ukuze ikunike esona sandi silungileyo, kubukhulu obuthathu. Amaphiko ngamagwegwe abekwe ngaphakathi kwisongezo sendlebe ngenjongo yokukunika uxhathiso olongezelelekileyo, kwaye inyani kukuba babathintela ngokupheleleyo ekushukumeni okanye ekuweni, bakwabandakanywa kubungakanani obuthathu.
Ukubabiza Banayo iadaptha yabo ye-microUSB esetyenziswa njengokubamba kunye nolawulo yee-headphone, kunye neklip yesikipa kunye nenye yokugoba kwentambo, oko ke kuthintela ukuba intambo ingashukumi kwaye ivelise naluphi na uhlobo lomnatha, intuthuzelo ngaphezu kwako konke.
Sihlalutya iJaybird X3
Kunzima kakhulu ukuba ungazidumisi ezi ntloko, zilungelelanisa ngokukhawuleza neemfuno zawo nawuphi na umsebenzisi, kananjalo aziwi kwaphela. Bashiya ngasemva umkhethe ngokuchasene nomgangatho weaudiyo zeBluetooth kwaye ngaphezulu kokuzimela kwabo ngoburhamncwa, kunzima ukudibana nezinye iimveliso. "Ingxaki" lixabiso, ayizizo ii-headphone ezingabizi, kunjalo, kodwa azenzelwanga uluntu oluqhelekileyo, kuphela ezo zifuna ezona zilungileyo ngawo onke amaxesha. Ngokwam, kuthenga kunzima kakhulu ukukujonga, kodwa awuyi kuphoxeka tu.
Ayikwazi ukulayisha ngaphandle kweklip
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Sihlalutya iJaybird X3, ezemidlalo eziphezulu ze-bluetooth ze-headphone